नेमार र बार्सिलोना : अधुरो ट्रान्सफरको अन्तर्कथा
निर्वान झापाली काठमाडाैं, ३१ भदाै
महिनौं हेडलाइनमा उक्लिएर विभिन्न कथा, उपकथा, दाबी, विरोध र अपेक्षाकाबीच नेमार पिएसजीबाट बार्सिलोनामा जाने सम्भावना र अन्योल केही समयलाई फेरि सेलाएको छ । अन्योल अझै बाँकी छ, हल्लामात्र कम भएको हो । अब यो सिजन वा कम्तिमा आधा सिजन नेमार पिएसजीबाटै खेल्नेछन् ।
नेमार बार्सिलोना फर्किने लगभग निश्चित भइसकेको समाचार लामो समय विभिन्न स्रोतबाट आए । तर, जब उनी पिएसजीमै रहने टुंगो लाग्यो, सबै आश्चर्यचकित थिए । सायद सबैभन्दा कम चकित हुनेमा चाहिँ नेमार आफैं पर्थे । महिनौंसम्म बार्सिलोना फर्किने उत्कट इच्छाका साथ हरसम्भव पहल गरेका नेमारलाई समर ट्रान्सफरको सुरुकै दिनदेखि डर थियो यो ट्रान्सफर अहिले सम्भव छैन ।
कुनैपनि ट्रान्सफर सफल हुन के चाहिन्छ ? अथवा कुनैपनि कारोबार सम्भव हुन के आवश्यक हुन्छ ? चाहे त्यो १ रुपैयाँको चकलेट होस् वा विलियन डलरका उत्कृष्ट फुटबलर, कम्तिमा एक चिज आवश्यक हुन्छ – पहिलो किन्न आतुर खरिदकर्ता र दोस्रो बेच्न इच्छुक विक्रेता । अथवा, दुवै भए झन राम्रो ।
तर, नेमार ट्रान्सफरको परिपेक्ष भने अनौठो रह्यो । बार्साले सोच्यो फ्रेन्च च्याम्पियन पिएसजी नेमारलाई बेच्न चाहँदैन, पिएसजीलाई लाग्यो स्पेनिस च्याम्पियन बार्सा नेमारलाई अनुबन्ध गर्न खासै इच्छुक छैन । यही आपसी असमझदारी वा गलत बुझाईले सुरुका दिनदेखि नै नेमारको ट्रान्सफर अन्योलमा राख्यो र अनिश्चिततामा सक्यो ।
कुनैपनि खेलाडीको ट्रान्सफर आफैंमा जटिल प्रक्रिया हो । त्यसमाथि नेमारको ट्रान्सफर सम्भवतः व्यावसायिक फुटबल खेलाडी ट्रान्सफर इतिहासकै सबैभन्दा जटिल ट्रान्सफर हुन सक्छ ।
तर, नेमार ट्रान्सफरको कथा यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो ?
अप्रिलमा नेमारले पिएसजीसँग आफ्नो सम्झौता नविकरणको कुरा अगाडि बढाए । अगस्ट २०१७ मा विश्वको सबैभन्दा महंगा खेलाडी बन्दै २२२ मिलियन युरोमा बार्साबाट पिएसजी गएका नेमार विभिन्न कारणले असन्तुष्ट थिए ।
पिएसजीले उनलाई अनुबन्ध गर्ने समयमा गरेको केही वाचा पुरा गरिरहेको थिएन भने पिएसजीका केही असन्तुष्ट फ्यानहरु मैदानमै बारम्बार नेमारको विरोध गरिरहेका हुन्थे । पिएसजीका अर्का फरवार्ड एडिसन काभानीसँग पेनाल्टी कसले हान्ने भन्ने विषयमा भनाभन भएपछि ड्रेसिङ रुम र ट्रेनिङ क्याम्पमा पनि गुटबन्दी सुरु भएको थियो ।
पिएसजीका कट्टर समर्थकहरु नेमारभन्दा काभानीको पक्षमा रहेको उनले महसुस गर्न थालिसकेका थिए । रेफ्रिहरुले पनि उनी माथिको ट्याकलमा आवश्यक कारवाही नगरेको भन्दै उनले मैदानमा असुरक्षित महसुस गर्दै थिए ।
जनवरीमा स्ट्रासबर्गविरुद्ध भएको खेलले नेमारलाई रेफ्रिमाथि प्रश्न उठाउन वाध्य बनाएको थियो । स्ट्रासबर्गका एन्थोनी गोन्काल्भेसले नेमारमाथि लगातार ३ वटा घातक फाउल गरे । हरेक फाउल पहेंलो कार्ड दिइनुपर्ने किसिमका थिए । तर, रेफ्रिले एउटा पनि कार्ड दिएनन् । सोही खेलमा लागेको चोटका कारण नेमारले १८ वटा खेल गुमाए । उनी विक्षिप्त भएका थिए ।
पिएसजीको टिम विश्वकै बलियो मध्येमा पर्छ । तर, कमजोर लिग र तुलनात्मक रुपमा फितला विपक्षीका कारण उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई पिएसजी सुनको पिँजडा भएको थियो । उनीहरुलाई खेलमा मेहनत गर्न त्यति धेरै आवश्यक नहुँदा ससाना विषयमा मनमुटाव बढ्दै जाँदा क्याम्पमा पनि असहिष्णु वातावरण हावी हुँदै थियो ।
तर पनि नेमार पेरिसमा खुशी थिए । फ्रेन्च लिग कमजोर भएपनि फ्रान्स, त्यसमाथि पनि पेरिस सुन्दर शहर हो जहाँ बस्न सबै लालायित हुन्छन् । त्यसैले त ट्रान्सफरको गाइगुइँ चलिरहँदा पनि नेमार सम्झौता नविकरण गर्न सहमत थिए । तर, जब च्याम्पियन्स लिग सेमिफाइनलको पहिलो लेगमा ३–० को अग्रताका बावजुद बार्सा लिभरपुलसँग दोस्रो लेगमा ४–० ले पराजित भयो कथाले नयाँ मोड लियो । एकाएक नेमार ट्रान्सफर मार्केटका हटकेक भए ।
बार्साले च्याम्पियन्स लिग जित्न नेमार अपरिहार्य हुने निष्कर्ष निकाल्यो । बार्साका अध्यक्ष जोसेफ बार्टोमेउले त लियोनल मेस्सी, जेरार्ड पिके, सर्जियो बुस्केट्स, सर्जि रोबर्टो र लुइस सुवारेजलाई बोलाएर आफुले जसरी पनि नेमारलाई क्याम्प नोउमा फर्काउने आश्वासन दिएका थिए । उनलाई नेमार पनि फर्किन इच्छुक रहेको विश्वास थियो ।
नेमारले बार्सा छाडेपनि केही असल साथी बनाउन सफल भएका थिए । उनी आफ्ना मिल्ने साथी मेस्सी, सुवारेज र पिकेसँग निरन्तर सम्पर्कमा थिए । उनीहरुबिच बार्टोमेउको आश्वासनका बारेमा पनि चर्चा भएको थियो ।
तीनैजना खेलाडीलाई के पनि थाहा थियो भने जाभी र इनिएस्टाले क्लब छाडेसँगै अब बार्सासँग फेरि च्याम्पियन्स लिग जित्न नेमारको विकल्प छैन । नेमार पनि आफ्नो बार्सा छाड्ने निर्णयलाई लिएर सन्तुष्ट थिएनन् । त्यसमाथि साथीहरुले पनि उक्साएपछि उनको पनि स्पेन फर्किने रहर जाग्यो ।
मेस्सीले पनि आफु ३२ वर्ष पुगिसकेकाले अबको केही वर्षमा नेमार नै बार्साको केन्द्रविन्दु हुनसक्ने उनलाई बताएका थिए । मेस्सीलगायतले फर्किन उत्प्रेरित गरेपछि नेमारमा पनि स्पेन फर्किने हुटहुटी जाग्यो ।
त्यसबेलासम्म बार्साले आधिकारिक रुपमा एन्टोइन ग्रिजम्यानलाई अनुबन्ध गरिसकेको थिएन । अथवा कम्तिमा बार्साले आफ्ना सिनियर खेलाडीलाई ग्रिजम्यानको आगमनका बारे आधिकारिक जानकारी दिएका थिएनन् । तर एट्लेटिको मड्रिड भने मार्चमै बार्साले ग्रिजम्यानसँग सम्झौता गरिसकेको दाबी गर्दै आएको थियो ।
बार्साका खेलाडीसहित सबैजनालाई के थाहा थियो भने यदी ग्रिजम्यान क्याम्प नोउमा आएमा नेमारलाई पनि ल्याउनु असम्भवप्राय हुनेछ । दुवै महंगा खेलाडी भएकाले बार्सासँग पैसा पुग्दैन थियो ।
अन्ततः बार्साले ग्रिजम्यान भित्र्याएको आधिकारिक घोषणा ग-यो । ग्रिजम्यानलाई ल्याउँदा नै बार्साले बैंकबाट ३५ मिलियन युरो ऋण लिनुपरेको थियो । यदि नेमार पनि आएको भए बार्सा बिल्लिबाँठ भएर ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने थियो ।
यता पिएसजीका नयाँ स्पोर्टिङ डिरेक्टर लियोनार्दोले नेमारका बारे सार्वजनिक रुपमै अनेकथरी नकारात्मक टिप्पणी गर्दै हिँडिरहेका थिए । उनको अभिव्यक्ति यतिसम्म क्षुद्र थियो कि अन्ततः दुईजनाको बोलचाल नै बन्द भयो । नेमार अब कुनैपनि हालतमा पिएसजीमा बस्ने पक्षमा थिइएनन् ।
तर, ढिलै भएपनि लियोनार्दोेले आफ्नो गल्ति महसुस गरे । त्यसपछि उनी नेमारको तारिफमात्र गर्न थाले । यसले मिडियामा मात्र होइन नेमारमा पनि द्विविधा उत्पन्न गर्यो ।
तर, वास्तवमा यो सब एउटा ‘फुलप्रुफ’ चाल थियो । पिएसजीका अधिकारीहरु बार्सा र नेमारसँग एकथरि कुरा गरिरहेका थिए भने आन्तरिक रुपमा अर्कै योजनामा थिए । पिएसजीका अध्यक्ष नासेर अल–खेलाफि कुनैपनि हालतमा गत ट्रान्सफर मार्केटमा नेमारलाई बेच्ने पक्षमा थिएनन् । पिएसजीका सबै अधिकारीको अभिव्यक्ति नासेर र क्लबका अन्य मालिकहरुको इच्छा अनुरुप ‘स्क्रिप्टेड’ थियो ।
सिजन सुरु हुन धेरै समय बाँकी थिएन । बार्साबाट पनि आधिकारिक रुपमा नेमारकका लागि कुनै प्रस्ताव पिएसजीलाई गएको थिएन । नेमारले यो अन्योलको घनत्व महसुस गर्दै सिजन सुरु हुनुभन्दा दुई दिनअघि नयाँ सिजन पिएसजीबाटै खेल्न राजी रहेको जानकारी गराए ।
नेमारको लाचारीको फाइदा उठाउँदै लियोनार्दोले उनलाई आफु पिएसजी छाड्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै विज्ञप्ती जारी गर्न अह्राए । तर, नेमार त्यसमा सहमत थिएनन् । उनले आफु खेल्न तयार रहेको तर ट्रान्सफरका विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै नहिँड्ने अडान लिए ।
नेमारलाई अझैपनि मेस्सीलगायतका साथीहरुले निरन्तर मेसेजमार्फत् बार्साले उनलाई अनुबन्ध गर्नेमा ढुक्क भएर बस्न आश्वासन दिँदै थिए । बार्सा भने अन्योलमा थियो । ऊ नेमारलाई ल्याउन त चाहन्थ्यो, तर यति ठूलो ट्रान्सफरलाई लिएर ‘कन्फिडेन्ट’ थिएन ।
त्यसपछि बार्सा मिडियाबाजीमा उत्रियो । बार्सा आफ्ना फ्यान र खेलाडी समक्ष नेमारलाई फर्काउन यथाशक्य प्रयास गरिरहेको साबित गर्नतिर लाग्यो । बार्साका प्रतिनिधि पेरिस जान लागेको खबर ८ दिन अगावै बाहिरियो । बार्साले नियतवश खबर नचुहाएको दाबी गरेपनि त्यो सत्य होइन । त्यो समाचारले सबैमा बार्सा नेमारलाई ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छाप बसाउन सफल भएको थियो ।
खासमा बार्सिलोनाले नेमारलाई अनुबन्ध गरेको भए उसले कम्तिमा २१५ मिलियन युरो तिर्नु पर्थ्याे । तर, बार्सासँग त्यत्रो पैसा थिएन । बार्साले अन्य खेलाडी सहित थोरै पैसामा नेमार बेच्न प्रस्ताव गर्यो । अन्ततः बार्साले २७ अगस्टमा मात्र नेमारलाई बेच्न पहिलो र एकमात्र लिखित तथा औपचारिक प्रस्ताव राख्यो ।
प्रस्तावअनुसार बार्सा नेमारका लागि पिएसजीलाई ११५ मिलियन युरो नगद, १५ मिलियन युरो ट्रान्स्फर बोनस तथा ३ जना खेलाडी दिन तयार थियो । पिएसजीले डिफेन्डर जिन–क्लेर तोदिबो र मिडफिल्डर इभान राकिटिच स्थायी रुपमा तथा फरवार्ड उसमान डेम्बेलेलाई लोनमा पठाउन माग गर्यो ।
सुरुमा इन्कार गरेपनि पछि तोदिबो र राकिटिच पिएसजी जान राजी भए । तर, डेम्बेलेले भने ठाडै इन्कार गरे । फ्रेन्च च्याम्पियनको सो प्रस्तावमा उनले फ्रेन्च भाषाकै दुई शब्दको जवाफ फर्काए ‘नन मर्सी’ । अर्थात, ‘नो थ्यांक्स’ ।
डेम्बेले कुनैपनि हालतमा बार्सा छाड्ने पक्षमा थिएनन् । तर, उनलाई फकाउन बारम्बार मध्यस्तकर्ताहरुले प्रयास गरे । पिएसजीका म्यानेजर थोमस टुचेलसँग त डेम्बेले ४ पटक यस विषयमा वार्ता गरे । तर, टुचेलले कहिल्यै उनलाई पिएसजी आउन कर गरेनन् वा कुनै लोभ नै देखाए । यो देखेर बार्सालाई लाग्यो नेमारको ट्रान्सफरमा पिएसजी गम्भिर छैन ।
यद्यपि विभिन्न पक्षबिच वार्ता चलि नै रह्यो । पिएसजीले विभिन्न बहानामा आफ्ना माग फेरिरह्यो । पिएसजीले बार्साले गरेको ११५ मिलियन युरो र १५ मिलियन युरो बोनसको सट्टा १३० मिलियन युरो र थप बोनस माग्यो । साथमा ३ जना खेलाडी छँदै थिए । बार्सा त्यसमा राजी भयो ।
पिएसजीले फेरि आनाकानी गर्न थाल्यो । उसले बार्सासँग नयाँ प्रस्ताव राख्यो । अब पिएसजी १५० मिलियन युरो नगद चाहन्थ्यो । बार्सा समस्यामा परो । तर, नेमार आफैले त्यसमा अग्रसरता देखाए । उनी ५ किस्तामा पिएसजीले मागेको थप २० मिलियन युरो तिर्न तयार भए । अब समस्यामा पर्ने पालो पिएसजीको थियो ।
तर, पिएसजी नेमारलाई फ्रान्समै राख्न कटीबद्ध थियो । उसले फ्रेन्च फुटबल फेडेरेसनको सहारा लियो । फेडेरेसनले खेलाडी आफैले आफ्नो ट्रान्सफर रकम तिर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै नेमारको अग्रसरतामा पूर्णविराम लगाइदियो ।
त्यहीबेला बार्साको चिरप्रतिद्वन्द्वी रियल मड्रिड पनि मैदानमा उत्रियो । यसअघि रियल नेमारलाई अनुबन्ध गर्न चासो छैन भन्दै आएको थियो । तर, उसले नेमारका लागि एक्कासी १०० मिलियन युरोका साथै फरवार्ड ग्यारेथ बेल, मिडफिल्डर जेम्स रोड्रिगेज र गोलकिपर केलर नाभास दिने प्रस्ताव गर्यो । तर, बेलको तलब एकदम धेरै थियो र उनी रियल छाड्ने पक्षमा पनि थिएनन् । जसकारण रियलको प्रस्ताव दिगो हुन सकेन ।
त्यसमाथि पनि पिएसजीलाई सधैं सन्देह थियो रियल नेमारलाई सकेसम्म सस्तो मूल्यमा ल्याउन चाहन्थ्यो । जसक्रममा आफुलाई घाँडो भएका खेलाडी पिएसजीलाई भिडाउने दाउमा थियो । र, बार्साको पहिलेका महत्वपूर्ण खेलाडी तथा अहिलेका मुख्य टार्गेटलाई अनुबन्ध गर्दा पेरेज र क्लब पुनः फ्यानका नजरमा हिरो हुने थिए । रोनाल्डोलाई बेचेकाले रुष्ट भएका फ्यान फकाउने योजना थियो रियलको ।
त्यसपछि युभेन्टस पनि नेमारमा इच्छुक देखियो । उसले १०० मिलियन युरो र पाउलो डिबाला दिने प्रस्ताव गर्यो । पिएसजीले धेरै नसोची अस्विकार गर्यो । प्रिमियर लिगका भने कुनैपनि क्लबले नेमारप्रति चासो दिएनन् । नेमार बार्सामै हुँदा भने म्यानचेस्टर युनाइटेडले १९० मिलियन युरोको प्रस्ताव गरेको थियो । नेमार त्यसबेला बार्सा छाड्ने पक्षमा थिएनन् । यसपटक भने युनाइटेडले पनि इच्छा देखाएन ।
अन्त्यमा नेमारले पनि आफु स्पेन नै फर्किन चाहेको बताए । तर, उनले बार्सा नै जान्छु भनेनन् । उनको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्थ्यो उनी रियल वा बार्सा जहाँ जान पनि तयार थिए । सायद उनी सशंकित थिए यदी बार्सासँग ट्रान्सफर सम्भव भएन भने उनको मिडियामा बदनाम हुनेछ । त्यसमाथि रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेज यस्ता अप्ठ्यारा ट्रान्सफर फुत्काउन माहिर थिए ।
तर, ट्रान्सफर मार्केट बन्द भयो । नेमार पिएसजीमै रहने भए । त्यसपछि एउटा अर्को प्रश्न खडा भयो । के बार्सिलोना वास्तवमै नेमारलाई फर्काउन चाहन्थ्यो । यदि चाहन्थ्यो भने कुन हदसम्म ?
जब बार्साले आयाक्सबाट फ्रेङ्की डि योङलाई भित्र्याउने प्रयासमा थियो त्यसबेला बार्टोमेउ आफैं उनलाई भेट्न र मनाउन नेदरल्यान्ड्स गएका थिए । तर, नेमारलाई फर्काउन भएका विभिन्न चरणका प्रयासमा बार्साका अन्य प्रतिनिधि गए, बार्टोमेउ आफैले कहिल्यै अग्रसरता देखाएनन् ।
बार्साले एकपटक फिलिपे काउटिन्हो पनि दिने प्रस्ताव गरेको थियो । पिएसजीले त्यसलाई ‘हाँस्यास्पद’ प्रस्ताव भन्दै अस्विकार गर्यो । त्यहीबेला हो पिएसजीले बार्सा नेमारका विषयमा गम्भिर नभएको आँकलन गरेको । बार्साका प्रस्ताव र प्रस्तावका प्रकृति हेर्दा लाग्थ्यो वास्तवमै बार्साले नेमारलाई भित्र्याउन हरसम्भव प्रयास गरेको थिएन । जति अन्य खेलाडीलाई गर्थ्याे ।
वास्तवमा, बार्टोमेउको लागि नेमार आउनु वा नआउनु दुवै ‘विन–विन’ अवस्था थिए । आएको भए उनी स्वत बार्साका हिरो हुन्थे । नेमार नआउँदा उनले २–३ वटा हल्का प्रस्ताव गरेर ‘मैले प्रयास गरेकै हुँ’ भन्ने अवसर पाए । साथै, नेमार पहिले बार्सामा हुँदा २ पटक क्लबले अदालमा मुद्दा खेपेको थियो । त्यसैले बार्साको एउटा गुट नेमार नआउन भन्ने चाहन्थ्यो । बार्टोमेउ त्यो गुटको नजरमा अहिले हिरो भए ।
नेमार आएको भए बार्सा ठूलो ऋणमा पर्ने थियो । अहिले नै बार्साको अनुमानित ऋण ६०० मिलियन युरो छ । तर नेमार आएको भए बार्सा केही उपाय निकालौंला भन्ने पक्षमा थियो । तर, पिएसजी नेमारलाई पठाउन तयार भएको भए पनि ला लिगाले बार्सालाई नेमार किन्न दिन्थ्यो वा दिँदैन थियो भन्ने पनि अन्योल नै थियो । किनकी ग्रिजम्यान र डि योङलाई अनुबन्ध गर्न थुप्रै रकम खर्चेको बार्सा फाइनान्सियल फेयर प्ले (एफएफपी) ले बाँधिएको थियो ।
बार्साले नेमार पिएसजीलाई बेच्दा सम्झौतापत्रमा ‘बाइ आउट क्लज’ उल्लेख गरेको थिएन । अर्थात् कुनैपनि मोडमा पिएसजी बार्सालाई नेमार बेच्न वाध्य हुने थिएन । बार्सा त्यहीँ चुक्यो । तर, अर्को वर्ष नेमार पिएसजी गएको ३ वर्ष पुरा हुनेछ । फिफाको व्यावसायीक फुटबल प्रावधान अनुसार नेमार अर्को वर्ष पिएसजीलाई आफुलाई बेच्न वाध्य बनाउन भने सक्नेछन् । तर, पिएसजी र बार्साबिच ट्रान्सफर रकममा सहमति भने आवश्यक छ ।
त्यसैले सबै पहल सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेमा नेमारसँग अर्को वर्ष सो विकल्प रहनेछ । तर, नेमारको पिएसजीका म्यानेजर टुचेलसँग पहिल्यैदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ । थप एक सिजन टुचेलसँग बिताउँदा नेमार बार्सा फर्किने विषयमा अहिलेजति गम्भिर नहुन सक्छन् । नेमारको व्यक्तित्व नै त्यस्तै छ । उनी चाँडै बहकिन्छन् ।
यो सिजनको ट्रान्सफर मार्केट बन्द भइसकेको छ । विन्टर ट्रान्सफरमा पिएसजीले नेमारलाई बेच्ने सम्भावना न्युन नै छ । त्यसैले नेमार, पिएसजी र बार्सिलोनाको त्रिकोणात्मक कथा कुन मोडमा पुग्छ भनेर थाहा पाउन अर्को समर ट्रान्सफर मार्केट पर्खिनुको विकल्प छैन । जे हुन्छ समयले बताउने छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १, २०७६, ०५:०५:००